Adeegyada – Somali
"Waxaan samayneynaa ganacsigaaga ganacsigeena si ka fiican"
"Ganacsigeenu waa inaanu hoggaamiyahaaga ka dhigno qaybtaada"
"U adeega mustaqbalka wanaagsan"
"Ka caawinaya inaad is-qabatid"
MACAAMIISHA SOO NOQDA
Ganacsi ama urur kasta waxa uu u baahan yahay korriin joogta ah.waxa horumar isbada joog ah la sameyn karaa marka uu hoggaanku garawsado muhiimada ay leedahay sidii ay cidda la shaqeysaa u fahmi lahaayeen una dhaqan gelin lahaayeen waxa ay tahay in la qabto iyaga oo jooga iyo iyaga oo maqanba.Sidaa darteed waxa aanu heegan u nayah in aanu kaa caawino sidii aad u horumarin lahaydeen aqoontiina iyo xirfaddiina hoggaamineed.
In uu ganacsigaagu lahaado dariiq cad waa astaamaha guusha .Hadaba si uu u guuleysto ganacsigaagu waxaa lagama maarmaan u ah in aad si cad u ogaato halka aad maanta taagan tahay. Halka aad dooneyso inaad gaadho iyo waliba dariiqa aad u mareyso si aad u gaadho. Hanti-Jire waxa uu kaa caawinayaa sidii aad ganacsigaaga uga rari laheyd halka uu ku sugan yahay adiga oo gaadhsiinaya halka uu yoolkaagu yahay iyada oo la raacayo dariiq cad iyo nidaam darriiq-xarriqasho la tijaabiyey.
Ma u maleynaysaa ganacsiga aan cusboonaysiin alaabtiisa,adeegyadiisa ama nimaadyadiisa in uu sii jirayo?
Haddii ay jawaabtu tahay haa,waxaa hubaal ah in uu ganacsigaagu soo gabagaboobayo.Waxa jirta odhaah ganacsiyeed caan ah oo tidhaahda “Wax cusub soo kordhi ama ka bax saaxadda ganacsiga”. Waxa aannu si dhab ah u raacsannahay odhaahdaas, annaga oo ka soo horjeedna in ay ganacsiyadu meesha ka baxaan oo burburaan.
Maamulka xisaabaadka iyo maaliyaddu waa wadnaha dhiigga wareejiya ee ganacsi kasta. Waxa aannu kaa caawin donnaa dhisidda nidaamyo casri ah oo kumbuyuutarka ku shaqanaya, in aannu kuu helno dadka ugu habboon ee ku shaqeyn lahaa nidaamyadaas, in aannu kaaga shaqayno xisaabaadkaaga, in aanu kuu samayno hanti-dhawr iyo in aannu kuu dhisno habraacyo lagu hubin doono ammaanka iyo sax ahaanshaha nimaadyadaas.